Foldable Phone ပြိုင်ပွဲမှာလည်း Samsung ထက် Huawei အသာရနေပြီလား?
22 Oct 2018 . 5:54 PM
အခုချိန်မှာ ခေါက်ချိုးစမတ်ဖုန်းချပြမယ်ဆိုပြီး ရှေ့ဆုံးကဦးဆောင်နေတာ Samsung ပါ၊ လာမယ့်လထဲ ကျင်းပသွားမယ့် Developer Conference မှာ Flexible OLED နဲ့ Foldable Smartphone မိတ်ဆက်သွားမယ်လို့ CEO DJ Koh ကိုယ်တိုင် အသိပေးပြီးထားပါ။
Samsung Foldable Phone Concept
ဒီနေရာမှာ ထပ်ပြီးကြွားလုံးထုတ်လိုက်တာက Huawei ၊ လက်ရှိ အောင်မြင်နေတဲ့ Mate 20 နဲ့ Mate 20 Pro မိတ်ဆက်ပွဲမှာတုန်းက Screen Size 7.2” အရွယ်စားရှိ Gaming Smarphone ဖြစ်လာမယ့် Mate 20X ကို ချပြသွားဖွယ်ရှိတယ်လို့ CEO Richard Yu ကိုယ်တိုင် ပြပွဲနေ့မှာကတည်းက အသိပေးခဲ့ပါတယ်။
Huawei Foldable Phone Concept
ဒါဆိုရင်တော့ Samsung ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့ Foldable Phone နမူနာကို Mate 20X နဲ့ Huawei လက်ဦးထားဖို့ကြိုးစားနေပုံပဲ။ Digital Trends မှာ “ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ 5G နည်းပညာအတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတယ်၊ အထူးသဖြင့် Foldable Smartphone တွေမှာ 5G ကွန်ယက်စနစ်ထောက်ပံ့ထားနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီး” Yu ပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ကောလာဟလတွေအရဆိုရင်လည်း Huawei က 5G Smartphone ဒေါ်လာသန်း ၆၀၀ ရင်းနှီးထားတယ်၊ Balong 5G01 ဆိုတဲ့ Huawei ကိုယ်ပိုင် Chip အသစ်နဲ့ Device အားလုံးမှာ အစဉ်ပြေပြေသုံးနိုင်ဖို့ ဇူလိုင်လလောက်ကတည်းက ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Rollable LG’s OLED Display
အခုလို အခြေနေတိုင်းသာဆိုရင် Samsung ကလည်း Youm ဆိုတဲ့ Flexible AMOLED Screen နဲ့ Foldable Smartphone ထုတ်မယ်၊ Huawei ကလည်း Balong 5G01 Chip အသုံးပြုထားမယ့် Foldable Mate 20X မိတ်ဆက်လာမယ်။
Intel’s Dual-screen Laptop
ဒါဆိုရင်တော့ Foldable Smartphone တိုက်ပွဲက ပြင်းထန်သထက်ပိုပြင်းထန်လာနေပြီ ပြောရတော့မယ်ပေါ့။ ဒီကြားထဲ LG Display ကလည်း Lenovo နဲ့ပူးပေါင်းပြီး 13” Foldable Tablet ထုတ်မယ်၊ Intel ကလည်း Screen ၂ ဖက်ပါ ကွန်ပျူတာထုတ်ဦးမယ်ဆိုတော့ အနာဂတ်စမတ်ဖုန်းနဲ့ နည်းပညာလောက ပိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလာခဲ့ပြီလို့ ပြောရတော့မလား?
Foldable Phone ပွိုငျပှဲမှာလညျး Samsung ထကျ Huawei အသာရနပွေီလား?
အခုခြိနျမှာ ခေါကျခြိုးစမတျဖုနျးခပြွမယျဆိုပွီး ရှဆေုံ့းကဦးဆောငျနတော Samsung ပါ၊ လာမယျ့လထဲ ကငျြးပသှားမယျ့ Developer Conference မှာ Flexible OLED နဲ့ Foldable Smartphone မိတျဆကျသှားမယျလို့ CEO DJ Koh ကိုယျတိုငျ အသိပေးပွီးထားပါ။
ဒီနရောမှာ ထပျပွီးကွှားလုံးထုတျလိုကျတာက Huawei ၊ လကျရှိ အောငျမွငျနတေဲ့ Mate 20 နဲ့ Mate 20 Pro မိတျဆကျပှဲမှာတုနျးက Screen Size 7.2” အရှယျစားရှိ Gaming Smarphone ဖွဈလာမယျ့ Mate 20X ကို ခပြွသှားဖှယျရှိတယျလို့ CEO Richard Yu ကိုယျတိုငျ ပွပှဲနမှေ့ာကတညျးက အသိပေးခဲ့ပါတယျ။
ဒါဆိုရငျတော့ Samsung ပွငျဆငျနတေယျဆိုတဲ့ Foldable Phone နမူနာကို Mate 20X နဲ့ Huawei လကျဦးထားဖို့ကွိုးစားနပေုံပဲ။ Digital Trends မှာ “ကုမ်ပဏီအနနေဲ့ 5G နညျးပညာအတှကျ ရငျးနှီးမွုပျနှံထားတယျ၊ အထူးသဖွငျ့ Foldable Smartphone တှမှော 5G ကှနျယကျစနဈထောကျပံ့ထားနိုငျဖို့အတှကျဆိုပွီး” Yu ပွောဆိုထားတာတှရေ့ပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ကောလာဟလတှအေရဆိုရငျလညျး Huawei က 5G Smartphone ဒျေါလာသနျး ၆၀၀ ရငျးနှီးထားတယျ၊ Balong 5G01 ဆိုတဲ့ Huawei ကိုယျပိုငျ Chip အသဈနဲ့ Device အားလုံးမှာ အစဉျပွပွေသေုံးနိုငျဖို့ ဇူလိုငျလလောကျကတညျးက ပွငျဆငျနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
အခုလို အခွနေတေိုငျးသာဆိုရငျ Samsung ကလညျး Youm ဆိုတဲ့ Flexible AMOLED Screen နဲ့ Foldable Smartphone ထုတျမယျ၊ Huawei ကလညျး Balong 5G01 Chip အသုံးပွုထားမယျ့ Foldable Mate 20X မိတျဆကျလာမယျ။
ဒါဆိုရငျတော့ Foldable Smartphone တိုကျပှဲက ပွငျးထနျသထကျပိုပွငျးထနျလာနပွေီ ပွောရတော့မယျပေါ့။ ဒီကွားထဲ LG Display ကလညျး Lenovo နဲ့ပူးပေါငျးပွီး 13” Foldable Tablet ထုတျမယျ၊ Intel ကလညျး Screen ၂ ဖကျပါ ကှနျပြူတာထုတျဦးမယျဆိုတော့ အနာဂတျစမတျဖုနျးနဲ့ နညျးပညာလောက ပိုရငျခုနျစိတျလှုပျရှားစရာကောငျးလာခဲ့ပွီလို့ ပွောရတော့မလား?